Ka Baxitaan: Kordhi Mawduucaaga Suuqgeynta 'ROI' oo leh Mawduuc Is-dhexgal ah | Martech Zone
Friday, May 14, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Mar uu dhawaan lahadlay Marcus Sheridan, wuxuu kahadlay tabta ay ganacsatadu uga maqanyihiin calaamadda markay horumarinayaan dadaalkooda suuq geynta dijitaalka ah. Waxaad ka dhagaysan kartaa qaybta oo dhan halkan:
Mid ka mid ah furaha uu la hadlay iyada oo macaamiisha iyo ganacsatadu ay sii wadaan inay si toos ah u toosiyaan safarada macaamiishooda ayaa ah waxyaabaha is dhexgalka ah. Marcus wuxuu xusay seddex nooc oo ah waxyaabo is-dhexgal ah oo awood u siinaya is-hagida:
Is-qorsheyn - kartida rajo laga qabo in la dejiyo taariikh iyo waqti si loola macaamilo astaanta iyadoo la adeegsanayo demo, webinar, ama wacitaan daahitaan.
Is-qiimeyn - kartida rajo laga qabo in sifiican loo fahmo qiimaha badeecad ama adeeg. Tani maahan in si cad loo gaaro, laakiin xitaa bixinta noocyo kala duwan ayaa muhiim u ah safarka.
Is qiimayn - kartida rajada si aad ugu dhex wareegto su'aalo taxane ah ama u qalmid kuwaas oo ka caawiya iyaga inay helaan talooyin ku saabsan alaabada ama adeegyada aad iibsaneyso.
Soo bixid: Madal Mawduuc Is-dhexgal ah
Si ka duwan xayeysiisyada, waxyaabaha ku jira is-dhexgalka waxay ku darsadaan qiimo iyagoo dhisaya kalsooni iyo ka caawinta iibsadaha inuu ku sii wado tallaabada xigta ee safarka wax iibsiga. Mawduucyada isdhexgalka ayaa si dabiici ah u ah fayras isla markaana si aad ah waxtar ugu leh soo jiidashada isticmaaleyaashaada… ku dhowaad 30% in ka badan bogga degista ee joogtada ah. Mawduucyada isdhexgalka ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad ku kasbato aragti badan oo ku saabsan isticmaaleyaashaada markay ka jawaabayaan su'aalaha oo ay galaan xogta.
Ku darista waxyaabaha isdhaxgalka wada natiijooyinka waxaa keena:
Kordhi Qiimaha Beddelka Macdanta "Lead" - U adeegso Outgrow's 1000+ qaabab qurux badan oo horay loo sii hagaajiyay si loo hagaajiyo heerarka beddelashadaada in ka badan 40%!
U-qalma Hogaaminta iyo Ku dar Qiime - Sii jawaabo shaqsiyeed oo ku saabsan macaamiishaada su'aalaha ugu culus, adoo u qalma hogaamintaada.
Ku Daabac Daqiiqado gudahood Meelkasta - Ku soo dallac mawduucyada 'Outgrow' ee boggaaga, sida soosaaraha, wadahadalka, ujeedka ka bixitaanka, ama boggaaga hoose.
Falanqaynta Sirdoonka iyo Isdhexgalka Xogta - Hel fikradaha macaamiisha intaad caawineysid, u kala qaybi dhagaystayaashaada kuna dar xogtaada wax ka badan 1000 qalab.
Istuudiyaha Horumarinta Mawduucyada ee 'Outgrow'
All of Ka baxayQaabdhismeedyadeeda si aad ah ayaa loo tijaabiyay loona habeeyay beddelaad, kaqeybgal, cabirka shaashadda, daalacashada, iyo wadaagista. Dhismahooda caqliga badan wuxuu bixiyaa hal xulasho, xulashooyin badan, xayeysiisyaal nambarro ah, miisaanka ra'yiga, qiimeynta, taariikhda / waqtiga qaataha, faylka la geeyo, iyo inbadan. Waxyaabaha is-dhexgalka ah ee aad dhisi karto waxaa ka mid ah:
Imtixaanada Qiimeynta / Qiimeynta
Nuxurka waxa si buuxda loo calaamadayn karaa si uu u tuso summadaada, u bixi laamo aan xadidnayn su'aal kasta, bixi fariimaha shuruudaysan ee ku salaysan natiijooyinka, waxaana lagu soo bandhigi karaa iyada oo loo marayo falanqaynta funnel si loo bixiyo aragtida waxqabadkaaga isdhexgalka. Wax-soo-saarka waqtiga-dhabta ah waxaa ka mid noqon kara jaantusyada xariiqda firfircoon, jaantusyada pie, miisaska, jaantusyada bar, jaantusyada radar, ama jaantusyada polar.
'Outgrow' wuxuu nooga fiicanyahay si ka wanaagsan baloogyada iyo buugaagta ebook sababtoo ah shaqsiyeynta ay bixiso. Kaliya kuma eka akhriska ama daawashada nuxurka mar dambe, rajo kastaa waxay helaysaa macluumaad shakhsi ahaaneed iyo mid khuseeya waqtiga dhabta ah hadday ahaan lahayd xisaabiyaha, kedis, talo bixin, ama chatbot.
Leonard Kim, Saameyn Sare oo Suuqgeyn ah, Forbes
Ka baxay waxaa ku jira in ka badan 1,000 is dhexgal ah oo wata xogta guud, iibka, iyo agabka suuqgeynta oo ay ku jiraan Google Sheets, Aweber, Mailchimp, Marketo, Hubspot, GetResponse, Emma, ​​MailerLite, Salesforce Pardot, Salesforce CRM, Olole Firfircoon, Dhibco, iyo in ka badan!
Ku Dhis Mawduucaaga Is-dhexgal ee Ugu Horeeya Bilaash
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa tayda Ka baxay xiriiriye ku xiran maqaalkan.
Tags: shaxanka baarcaqli galintaxisaabintacalculatorxisaabiyahachatbotsheekooyinkafarriin shuruudaysanqaab dhismefoomamkafalanqaynta funnelkordhinta siciradakordhiya sheekooyinkakordhin hawlgelintakordhinta iibkawaxyaabaha la wadaagayoshaxanka sadarkadhisaha qiimeynta internetkadhise xisaabiyaha internetkadhise chatbot onlinedhise kedis onlinedhisaha sahanka internetkaqalabka sahanka internetkaweynaanshojaantusyada piejaantusyada polarkedis dhiseweydaartaajaantusyada radarsahan dhisemiisaska
Jun 17, 2021 saacadu markay ahayd 2:28 AM
Boostada weyn sida caadiga ah Douglas,
Mawduucu si dhakhso leh ayuu uga socon karaa khadka tooska ah, gaar ahaan haddii aad ku jirto ganacsi xawaare ku socda. Xitaa waxa loogu yeero "weligiis cagaaran", oo ay habboon tahay in dhowr sano, aragti ahaan, laga yaabee inaysan rafcaan u ahayn akhristayaasha ama Google dhowr sano gudahood.